၁. နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မှတ်ပုံတင်ကိုယ်ရေးအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း (နိုင်ငံသားသည် မှတ်ပုံတင်။ နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် တရုတ်ပြည်မနိုင်ငံသားသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအထောက်အထား)။
၂. နိုင်ငံသားအိမ်ထောင်စုဇယား၊ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်းရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံ ၁ ပုံ (နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အသစ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသောဓာတ်ပုံအရွယ်အစားကို ဤဝန်ကြီးဌာန “အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးရာဝဘ်ဆိုက်” http:// www.ris.gov.tw/ သို့ စုံစမ်းရှာဖွေပါ)၊ တံဆိပ်တုံး(လက်မှတ်ရေးထိုးလို့ရ)။
(၁) နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းခြင်း : ကွာရှင်းစာချုပ် ( သက်သေခံ ၂ ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော သက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားပါရှိရမည်။) ကိုယူဆောင်ကာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုယ်တိုင် နေရာတကာရှိ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့သွားရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
(၂) တရားစီရင်ချက်အရကွာရှင်းခြင်း : ကွာရှင်းအစီရင်ခံစာနှင့် ဆုံးဖြတ်လက်မှတ်ယူဆောင်ရန်။ တစ်ဖက်တည်းသော သို့မဟုတ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုယ်တိုင် နေရာတကာရှိ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့သွားရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
(၃) တရားရုံးမှဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းသဘောတူခြင်းကြောင့်ကွာရှင်းခြင်း : တရားရုံးမှဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသည့်မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းသဘောတူသည့်မှတ်တမ်း ယူဆောင်ရန်။ တစ်ဖက်တည်းသော သို့မဟုတ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုယ်တိုင် နေရာတကာရှိ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့သွားရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
နောကျဆုံးအခွအေနေ: 2021-5-8 ဧညျ့သညျမြား: 457156